အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့ မဟုတ်) ရီလေတီဗတီ သို့ခြေလှမ်းစတင်ခြင်း – အပိုင်း (၁) | Curiosity Science Magazine
အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့ မဟုတ်) ရီလေတီဗတီ သို့ခြေလှမ်းစတင်ခြင်း – အပိုင်း (၁)
August 12, 2016 · by Thaw Zin Htun	· in Physical Science.	·
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း တုန်း က အရမ်း ကို ရေပန်းစားနေတဲ့ Interstellar ဆိုတဲ့ Christopher Nolan လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ကား မှာ အဓိက အခြေခံထားတဲ့အချိန်ဟာနှိုင်းရပဲဆိုတဲ့သဘောတရားကို သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီဟာ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကိုအခြေခံထားတာပါ ။ အဲ့ဒီရီလေတီဗတီဆိုတာဘာလဲ ? အချိန်ဆိုတာဘာလဲ ? သူ က ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေလို့ အရာရာတိုင်း ကို စီမံနေရတာလဲ ? ဒီဆောင်းပါး မှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ ရီလေတီဗတီ ဆီ ကို ခရီးနှင်ကြတာပေါ့ ။
ပကတိ (Absolute) နဲ့နှိုင်းရ (Relative)
ပကတိ (absolute) ဆိုတာ တစ်ခြားသော အရာတွေအပေါ်မှာ မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ သူ့ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ကို သူ လိုက်နာနေတာကိုပြောတာပါ ။ နှိုင်းရ (Relative) ဆိုတာ က တော့ တစ်ခြားသော အရာတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲ တတ်တာ ဆိုလိုတာပါ ။ လွယ်လွယ် မှတ်လိုက်ရအောင် ။ ပကတိဆိုတာကတော့ ဘယ်တော့မှ မျက်နှာ မများ ၊ တစ်ခြားကောင်မလေးတွေဘယ်လောက်ပဲလှနေပါစေ ဘယ်တွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ သူ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကလွဲရင် တစ်ခြားသူ ကိုစိတ်မ၀င်စားတဲ့ ကောင်လေးပေါ့ ။ နှိုင်းရ ဆိုတာကတော့ သူ့ ရဲ့ အချစ်ကတည်မြဲမနေဘူး ၊ ဟိုကောင်မလေး ချောရင် ဟိုကောင်မလေး နောက် ပါသွားလိုက် ၊ ဒီကောင်မလေး ချောရင်ဒီကောင်မလေးနောက် ပါသွားလိုက်နဲ့ကောင်မလေး တွေအလှပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်ပြောင်းနေတဲ့ကောင်လေး ပေါ့ ။ ( ကိုကျော်စွာလင်း လို ပေါ့ ၊ သွားမပြောကြေးနော် ။ :P)
ရွေ့ လျားခြင်း (Motion)
ဘယ်လိုလုပ် ပြီး ပကတိတွေ နှိုင်းရ တွေ ကနေ အရွေ့ဘက်ကို လျောက်သွားတာ လဲကွ ဆိုပြီးတော့ စိတ်မစောလိုက်ပါနဲ့ ဗျာ ။ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ (Relativity Theory) ကို သေချာစဉ်းစာတော့မယ်ဆိုရင် အခြေခံကနေ ပြန်ပြီး အကုန်လုံးကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားမှရမှာမို့ လို့ ပါ ။ အရာဝတ္ထု တစ်ခုရဲ့ ရွေ့ လျားခြင်း ကို ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ။ Aristotle ရဲ့ အဆို အရ “အား” ဟူသည်ငြိမ်သက်နေသော အရာဝတ္ထုများကိုစတင် ရွေ့ လျားစေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် တဲ့။ Galileo နဲ့Newton တို့ နှစ်ယောက် မတင်ခင်ခေတ်မှာ လူတွေဟာ အရွေ့နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အခါမှာ Aristotle ရဲ့နိယာမ တွေ အတိုင်းအသုံးပြုကြပါတယ် ။ Aristotle အရဆိုရင် အရာဝတ္ထုနှစ်ခု ဟာ အမြင့်တစ်ခု က နေ ပြုတ်ကျတဲ့အခါ မှာ ဒြပ်ထုပိုကြီးတဲ့အရာ ဟာ ပိုပြီး မြန်မြန်ကျမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဆူးလေမီးသတ်မျှော်စင်ပေါ် ကနေ အုတ်ခဲတစ်လုံးနဲ့ဂေါ်လီလုံးတစ်လုံး ကို ပစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ အုတ်ခဲဟာ ဂေါ်လီလုံးထက်အရင် မြေကြီးပေါ်ကျ မယ်လို့ Aristotle က ဆိုပါတယ် ။ အဲ ခက်တာတစ်ခုက Aristotle ရဲ့ထုံးတမ်းမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ အတွေးတစ်ချို့ နဲ့ တင် လောကနိယာမတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်လို့အယူရှိကြပါတယ် ။ ဥပမာ ညီမျှခြင်းတစ်ခုဟာ ဒီကိစ္စ မှာအဆင်ပြေပီဆိုတာနဲ့အဲ့ညီမျှခြင်း ကို တခြား ကိစ္စတွေမှာလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ သဘောပေါ့ ။ အဲ့တော့ Galileo မတိုင်ခင်ထိ လူတွေဟာ အုတ်ခဲနဲ့ဂေါ်လီလုံး ကိုလဲ ပစ်မချဖူးပါဘူး ။ (မတော်ခေါင်းပေါ်ကျရင် Aristotle လဲကယ်နိုင်တာမဟုတ် ) ။
Galileo ဟာ Aristotle ရဲ့ အဲ့ဒီ နိယာမ မှားကြောင်း ကို Galileo ဟာ Pisa မြို့ က စောင်းနေတဲ့ မျှော်စင်ကြီး (the leaning tower of Pisa) ပေါ်ကနေပြီး တော့ အလေးချိန်မတူတဲ့ ပစ္စည်းနှစ်ခုကို ချပြပီး စမ်းသပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ အင်းးး ဒါကတော့ချဲ့ ကားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ သူတကယ် အဲ့ မျှော်စင်ပေါ်တက်စမ်းမယ်တော့မထင် ။ မတော် အောက်က လူခေါင်းကွဲရင် လျော်ရမဲ့ အလုပ်မျိုးသူလုပ်မှာ မဟုတ် ။ ဒါပေမဲ့ Galileo ဟာ ဆင်တူတဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ချောမွေ့ နေတဲ့ ကုန်းဆင်း လေးတစ်ခုကနေ သူ ဟာ အလေးချိန်မတူတဲ့ ဘောလုံးနှစ်ခုကို (အချိန်တစ်ခုထဲမှာ) လှိမ့်ချခဲ့ရာ ကနေ ပြီး ဒီဘောလုံးနှစ်ခုဟာ မြေပြင်ပေါ်ကို တစ်ချိန်ထဲကျရောက်တယ်ဆိုတာ ကိုတွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့ တိုင်းတာချက်တွေ အရ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုလုံးဟာ သူတို့ ရဲ့ အရှိန်တွေ ဟာ နှုန်းတစ်ခုထဲပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲပါတယ် တဲ့ ။ ဒါကို ယူပြီးတော့ ဒေါင်လိုက်ကျတဲ့ ၀တ္ထုနှစ်ခုဟာလဲ သူတို့ ရဲ့အလေးချိန် ဒြပ်သား တွေအပေါ်ဘာမှမမူတည်ဘဲ( ဘယ်အရာဝတ္ထုမဆို ) နဲ့နေရာတစ်ခုထဲက တစ်ချိန်ထဲ ကျလို့ ရှိရင် မြေပေါ်ကိုတစ်ချိန်ထဲရောက်ပါတယ် ။ ကျောက်ခဲနဲ့ ငှက်မွှေးနှစ်ခု ချမယ်ဆိုရင်တော့ ကျောက်ခဲက အရင်ကျမှာပေါ့ ။ အဲ့တာ လေထုရဲ့ ခုခံအား ( Air Resistance ) ကြောင့်ပါ ။ လေထု ကို သာဖယ်ကြည့်ပြီး လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုဟာ တစ်ချိန်ထဲကျမှာပါ ။ လေရဲ့ ခုခံအား ကို ကျော်လွန်တဲ့ မည်သည့်ပစ္စည်းနှစ်ခုမဆို (ဥပမာ အုတ်ခဲနဲ့ ဂေါ်လီလုံး) ဆိုရင် မြေပေါ်ကို တစ်ချိန်ထဲမှာ သာ ကျရမှာပါ ။ ကျောက်ခဲ နဲ့ ငှက်မွေး ကိုလဲ လေကိုစုပ်ထုပ်ထားတဲ့ ဖန်ပြွန်ချောင်း တွေထဲမှာ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ တစ်ချိန်ထဲကျပါတယ် ။
ဒီ အချက် ကို အခြေခံပြီးတော့ Newton ဟာ သူ့ ရဲ့ ရွေ့လျားမှုနိယာမတွေကိုတွက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ခုနက ချောမွေ့ တဲ့ ကုန်းဆင်းလေး ကို ပြန်ကြည့်ရအောင် ။ သူတို့ နှစ်ခုပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့ အား ဟာ သူ တို့ ရဲ့ အလေးချိန်တွေပါပဲ ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Net Force လို့ ခေါ်တဲ့ ပြင်ပအား သက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့ ။ ပြင်ပအားတစ်ခုသာသက်ရောက်လိုက်မယ်ဆို၇င် သူတို့ ရဲ့ကျနှုန်းတူတာမှာမဟုတ်ဘူး ။ အား သက်ရောက်ခံရတဲ ကောင်က ပိုပြီး မြန်မြန်ရွေ့တော့မှာပေါ့ ။ အဲ့ဒီတော့ ကောက်ချက် ချလို့ ရတာ က “အား” လို့ ခေါ်တဲ့ Force ဆိုတဲ့ အရာ ရဲ့ အဓိက အကျိုးသက်ရောက်မှု ဟာ အရှိန်ကို ပြောင်းလဲစေတာပေါ့ ။ အရင်က Aristotle ယူဆခဲ့သလို စတင် ပြီးရွေ့လျားဖို့ တစ်ခုထဲအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ရွေ့ လျား နေတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခု ဟာ ပြင်ပအားတစ်ခု၏ သက်ရောက်မှုကိုမခံရမခြင်း သူ့ ရဲ့နဂို အရှိန်နှုန်းဖြင့်သာဆက်လက်သွားလာနေမယ် လို့ ဆိုလိုပါတယ် ။ ဒီအဆို ကို နဲနဲရင်းနှီးသလိုများမဖြစ်မိဘူး လား?? ၁၆၈၇ ခုနှစ်မှာ “Principia Mathematica” လို့ ခေါ်လို့ တဲ့ Sir Isaac Newton ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်မှာ အဲ့နိယာမ ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ Newton ရဲ့ ပထမနိယာမ ( Newton’s First Law of Motion ) လို့ လူသိများပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာဝတ္ထုကို ပြင်ပ အား သက်ရောက်ခဲ့ရင် ( F=ma ) ဆိုတာကို တော့ Newton ရဲ့ဒုတိယ နိယာမ (Newton’s Second Law of Motion) လို့ လူသိများပါတယ် ။ ဒီ ဒုတိယ နိယာမ ကို ကိုင်ဆွဲပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ခုနက အလေးချိန်မတူတဲ့ အရာဝတ္ထုနှစ်ခု ဘာလို့တစ်ချိန်ထဲကျလဲဆိုတာ ကို တိတိကျကျဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ် ။ F=ma အရ (m = ဒြပ်ထု ,a= အရှိန်ပြောင်းလဲခြင်း ) ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ တူညီတဲ့ အရှိန်ပြောင်းလဲနှုန်း တစ်ခု ( Acceleration due to Gravity, g = 9.81 m/s) နဲ့ အတူ နှစ်ခုလုံးဟာ အတူတကွဆင်းရတာကြောင့်ပါ ။ ပိုကြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ သက်ရောက်တဲ့အားကလဲပိုပီး ကြီးမားပါတယ် ။ သက်ရောက်မှုအား ကို တည်ပြီး ဒြပ်ထု နဲ့ စားတဲ့အခါသူတို့ ရဲ့ ကျဆင်းမှုနှုန်း ဟာ တူတူ ပဲထွက်လာပါတယ် ။ ( ပုံ – ၁ တွင်ရှု )
Newton ရဲ့ နောက်ထပ်ကြီးကျယ်တဲ့တွေ့ ရှိချက်တစ်ခုကတော့ ဖြင့် ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ အာကာသ ကြီးကို နားလည်မှု စေနိုင်ဖို့ အတွက် ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ တောင် ပြောလို့ ရပါသည်။ ။ F= G (m1 x m2 /r2 ) ဆိုတဲ့ ညီမျှခြင်းပါ ။ (G = 6.67384 × 10-11 m3 kg-1 s-2 ) အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကြားမှာ ရှိသော ဆွဲငင်အားသည် ထိုအရာ ၀တ္ထုနှစ်ခု၏ဒြပ်ထုများ မြှောက်လဒ် နှင့် တိုက်ရိုက် အချိုးကျပြီး သူတို့ ကြားရှိ အကွာအဝေး ၏ နှစ်ထိပ်ကိန်းနှင့်ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ။ ဆိုလိုချင်တာက ထိုဒြပ်ထုနှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုကို နှစ်စ တိုးလိုက်ပါက နဂိုအားထက် နှစ်ဆ ပိုများ သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့ မဟုတ်နှစ်ခုကြားမှ အကွားအဝေး ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါက သက်ရောက်မှုသည်ချက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ရမည် ။ ထို့ ကြောင့် ဒြပ်ထု ပိုများသော ၀တ္ထု အပေါ်သက်ရောက်သော အားသည်လဲ ဒြပ်ထုငယ်သော ၀တ္ထုအပေါ်ပိုများ သော အား ထက် ပိုမိုကြီးမား ခြင်း ပါလေသည် ။ ဒီ နိယာမ ဟာ ဒါလောက်တင်ရှင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကမ္ဘာအပါအ၀င် ကျန်တဲ့ ဂြိုဟ်တွေ အကုန်လုံးဟာ နေ ကို ဘယ်လိုလှည့်ပတ်လဲ ဆိုတာ ကို ဒီညီမျှခြင်း တစ်ကြောင်းနဲ့Newton ဟာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။
ပုံ – ၁ : ဒြပ်ထုမတူညီသော အရာဝတ္ထုနှစ်ခု တစ်ချိန်ထဲပြုတ်ကျပုံ ရှင်းလင်းချက်
Newton နဲ့Aristotle ရဲ့နိယာမ တွေ မှာ အဓိက ခြားနားတဲ့အချက်ကတော့ ရပ်နေ မှု (rest) အပေါ်မှာ ကွာခြားတဲ့အမြင် ပါပဲ ။ Aristotle ဟာ ကမ္ဘာမြေကြီး ဟာ တည်ငြိမ် နေတဲ့အခြေအနေ တစ်ခု မှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပြီး စဉ်းစားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Newton နိယာမ တွေ မှာ တွေ မှာတော့ ရပ်နေမှု ဟာ တရားသေ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ဥပမာ ကျွန်တော် က ရထားပေါ်မှာ နေမယ်ဆို၇င်ရထား က ရပ်နေပြီး ပြင်ပ က အရာတွေကသာ လှုပ်ရှားသလို ဖြစ်နေတယ် ။ ရထားအောက်ကလူအတွက်တော့ ပြင်ပက ရပ်နေပြီး ရထားက လှုပ်ရှားသလို ဖြစ်နေတယ် ။ ရထား ကို ငြိမ်နေပြီး မြေကြီး က ရွေ့ နေတာလို့ တွက်လဲ တူတူ ပဲ ။ ရထားက ငြိမ်နေပြီ မြေကြီးလှုပ်နေတယ်တွက်လဲတူတူပဲ ။ တွက်ချက်မှုတွေ လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်ဟာက လှုပ်ရှားတယ် ပဲ ယူယူ အဖြေက တူတူ ပဲထွက်လာပါတယ် ။ အဲ့ဒီတော့ ပကတိတရားသေယူလို့ ရတယ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးပေါ့ ။ ( ရထားနဲ့ မြေကြီး ကြားက နှိုင်းရ အလျှင် (relative velocity) ဟာ ပမာဏ တူပြီး ဦးတည်ချက် ကွဲပါတယ် ။)
ဒီ အတွေးအခေါ် ကိုချဲ့ ပြီး ပိုရှင်းအောင်တွေးကြည့်၇အောင်။ ကျွန်တော်က နေပြီး တော့ “မန္တလေးမြို့ ကိုဘယ်လောက်ဝေးလဲ” လို မေးရင် ခင်ဗျား ဘယ်လိုဖြေမလဲ ? တကယ်ဆို အဲ့မေးခွန်းမှာ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိပါဘူး ။ မန္တလေး မြို့ ကိုဘယ်လောက်ဝေးလဲ ဆိုတာ ဘယ်ကနေ တိုင်းလဲဆိုတာအပေါ် မူတည်ပါတယ် ။ မန္တလေးဟာ ရန်ကုန်ကနေ ဘယ်လောက်ဝေး လဲ ? ပဲခူးကနေ ဘယ်လောက်ဝေးလဲ ? တောင်ကြီး ကနေ ဘယ်လောက်ဝေးလဲ ? ဆိုမှသာ ဖြေလို့ ရတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်လာပါတယ် ။ မန္တလေးမြို့ ရဲ့အကွာအဝေး ဆိုတာ ဘယ်ကနေ ကြည့်လဲဆိုတာအပေါ် မူတည်ပါတယ် ။ (ပုံ-၂) သူမှာ ပကတိ အကွာအဝေး (Absolute Distance) ရယ်လို့ မရှိပါဘူး ။ နှိုင်းရ အကွာအဝေး (Relative Distance) ပဲရှိပါတယ်။ အကွာအဝေး ဆို တာ တစ်နေရာ က နေ တစ်နေရာ ကို ရည်ညွှန်းတဲ့ နှိုင်းရတစ်ခုပါပဲ ။ ထို့ အတုပဲ (ကျွန်တော့်ရဲ့Hyperspace ဆောင်းပါး က Cartesian Co-ordinate တွေကြောင်းမှတ်မိဦးမှာပါ ၊ အကျဉ်းချုပ်ပြီးရင်ပြန်ရှင်းပြပါ့မယ် ။ ) Cartesian Co-ordinate မှာ လဲ Origin (0,0,0) ဟာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာချနိုင်ပါတယ် ။ ပကတိ ယူလို့ ရတဲ့နေရာ ဆိုတာမရှိပါဘူး ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆို၇င် Newton ရဲ့ အယူအဆ တွေ ဟာ ပကတိ ဟင်းလင်းပြင် (absolute space) ရဲ့အယူအဆ ကို တွန်းလှန်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ ။ ပကတိ ဟင်းလင်း ပြင် မ၇ှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာထက် ပကတိဟင်းလင်းပြင် ကို မူတည်ပြီး အရာဝတ္ထုတွေဟာရွေ့ လျားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုလိုက်တာပါ။
Newton ကော Aristotle ကော ရဲ့ တူညီတဲ့ ယူဆချက်ကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အချိန်ကို ပကတိဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတာပါပဲ ။ အခြေအနေတစ်ခု ရဲ့ကြာချိန်တစ်ခု ဟာ ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး ။ ဘယ်လို ပဲတိုင်းတိုင်း ဒီအချိန်တစ်ခု ဟာ တရားသေဖြစ်နေရမဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ ။ အချိန် (time) ဟာ ဟင်းလင်းပြင် (space) အပေါ်မှာမူတည်မှုလုံးဝ မရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့။ အချိန်သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ ။ တစ်သမတ် သဘောကိုဆောင်သည်ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဟာကကော အမြဲမှန်နေပီတဲ့လား?
ပုံ-၂ : နှိုင်းရ အကွာအဝေး ကိုဖော်ပြပုံ
ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ Newton ပြီးတော့ နောက်နှစ်များစွာမှာ ဒီ ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ နိယာမ သုံးခု ( Newton’s three laws of motion) ကို စိတ်ချစွာ အခြေအနေတိုင်းမှာ အသုံးချနေခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အသုံးချမှုတွေဟာ ကားမောင်းတာမျိုး ၊ သာမန် ပစ္စည်းတွေ ရွေ့ လျားသွားလာတာမျိုး တွေ လောက်မှာတော့ မှန်ကန်နေပေမဲ့ အရာဝတ္ထုတွေဟာ အလင်းရဲ့ အလျှင်နဲ့ သွားတာကို လေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ ကမောက်ကမ တွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ် ။
Emedocles လို့ ခေါ်တဲ့ ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဟာ အလင်းရဲ့အလျင်ဟာ အနန္တကိန်းတစ်ခု(တွက်ချက်မရအောင် ကြီးမား)ုမဖြစ်နိုင်ဘူး ။ တစ်သမတ် အလျှင်တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာကို ပထမဆုံးစစဉ်းစားမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ Aristotle ကတော့ ဒီအဆိုကိုငြင်းခဲ့ပါတယ် ။ အလင်းဆိုတာ သွားလာနေတာမဟုတ်ဘူး ။ ဖြစ်တည်အနေနဲ့ အရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပီးအရွေ့မရှိ လို့ ငြင်းခဲ့ပါတယ် ။
တကယ်တမ်းအလင်းရဲ့ အလျှင်ဟာ အနန္တကိန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အယူကို ကိုင်ပြီးတွက်ချက်ခဲ့သူဟာ Ole Christensen Roemer ဆိုတဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးပါ ။ ဂျူပီတာဂြိုဟ် ရဲ့ လ ဟာ ဂျူပီတာ ဂြိုဟ် ကိုပတ်တာကိုကြည့်ပြီး သူတွက်ချက်ခဲ့တာပါ ။ (တွက်ချက်ပုံအသေးစိတ်ကို မဖော်ပြတော့ပါ ။ ) အလင်းရဲ့ အလျင်ဟာ တစ်စက္ကန့် မှာ မိုင်ပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ သွားနိုင်တယ်လို့ တွက်ချက်ခဲ့ပါတယ် ။ လက်ရှိတွက်ချက်မှုတွေအရ အလင်းဟာ တစက္ကန့် မှာ မိုင်ပေါင်း ၁၈၆၀၀၀ မိုင် သွားနိုင်ပါတယ် ။ Roemer ရဲ့ တွက်ချက်မှုက အဖြေဟာ မတိကျပေမဲ့ အဲ့ဒီခေတ်အနေနဲ့ ဆိုတော့ ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ သူဟာ အလင်းအလျှင် က အနန္တကိန်းတစ်ခု မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ကို သက်သေပြခဲ့ပြီး တွက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာ Newtonရဲ့ နိယာမတွေ ထက် ၁၁ နှစ်စောပါတယ် ။ ) ဒါပေမဲ့ Newton ရဲ့ ပကတိဟင်းလင်းပြင်အယူအဆ ကို ပယ်ဖျောက်ခဲ့တဲ့ တဲ့ နိယာမတွေ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီအလင်းအလျှင် ဟာ တိကျတဲ့ နှုန်းတစ်ခုရှိရမယ်လို့ လူတွေဟာ မယုံကြည်တော့ပါဘူး ။
နောက်ထပ်အလင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ တိကျတဲ့ သီအိုရီတွေ ကို James Clerk Maxwell ဟာ ၁၈၆၅ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ခဲ့ပါတယ် ။ (Maxwell ဟာ သမိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးသိပ္ပံပညာရှငိတွေထဲ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ သူနဲ့Faraday တို့ အကြောင်း ကို ဆောင်းပါးသက်သက်ရေးပြီးဖော်ပြပါ့မယ်။ ) Maxwell ရဲ့ နိယာမ တွေအရ ဆိုရင် အလင်းဟာ တိကျသေချာတဲ့ နှုန်းတစ်ခုနဲ့ သွားရပါမယ် ။ တစ်နည်းအားဖြင့် အလင်းအလျှင်ဟာ ကိန်းသေတစ်ခု ဖြစ်နေရမယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ ငြင်းစရာတွေဖြစ်လာပါပြီ ။ Newton ရဲ့ နိယာမတွေ အရဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဟာ ပကတိဟင်းလင်းပြင် ရဲ့ အယူအဆ ကို ပယ်ထုတ်လိုက်ပြီးပြီ ။ ပကတိဟင်းလင်းပြင် မရှိတဲ့ အချိန်မှာ တိကျသေချာတဲ့ အရှိန် တစ်ခုကို ရဖို့ ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးလေ ။ အရှိန်ဆိုတာ အတိုင်း အတာ (Displacement) ကိုတည်ပြီး အချိန် (Time) (အချိန်ကို ပကတိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ယူဆထား) နဲ့ စားထားတာပါ ။ ပကတိအတိုင်းအတာလို့ မှမရှိတဲ့အခါမှာတော့ တိကျတဲ့ အရှိန် (သို့ ) ကိန်းသေ အရှိန် တစ်ခု ဆိုတာလဲ တစ်ခုခုကိုမူတည်ပြီး နှိုင်းရသဘောနဲ့ ယူမှဖြစ်တော့မှာပေါ့ ။ အဲ့ဒီမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ Maxwell နဲ့Newton နှစ်ယောက်ကို ညှိဖို့ အတွက် Ether (luminiferous aether) လို့ ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်လိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကြာဝဠာကြီးဟာ Ether ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ် ။ Ether ဆိုတဲ့ အရာဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ် ။ ဘာမှမရှိတဲ့ ဟင်းလင်းပြင် ထဲမှာတောင်မှ ether ကတော့ရှိနေတယ် ။ အသံဟာ လေ ကို ကြားခံနယ်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့ သွားသလို အလင်းဟာလဲ ether ကိုကြားခံနယ်အဖြစ်သွားတယ်လို့ယူဆကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီတော့ ether ကိုမူတည်ပြီး အလင်းရဲ့ အလျင်ကို နှိုင်းရ သဘောယူ ရမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတော့တယ် ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှုယူလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့ ။ ether ရဲ့ ရွေ့လျားမှု နဲ့ခင်ဗျားရဲ့ ရွေ့လျားမှု (လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှရပ်မနေနိုင်ပါဘူး ၊ ကမ္ဘာနဲ့ အတူတူ စကြာဝဠာကြီးထဲမှာ တစ်နာရီကိုမိုင်ပေါင်းတစ်ထောင် ခန့် နဲ့ ခရီးသွားနေရပါတယ် ။ ) တွေပေါ်မူတည်ပြီး ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် ရဲ့အလင်းကိုတိုင်းတာမှုလိုက်ရင် အလင်းရဲ့ အလျှင် တွေဟာကွာလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ အလင်း က နေပြီးတော့ Aether ပေါ်မူတည်ပြီ့း သွားနေတဲ့အလျှင် ကတော့ တသမှတ်ထဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ ဥပမာပေးရရင် ether နေရာမှာ ခင်ဗျားရဲ့ မိခင်ကို အစားထိုးကြည့်ပါ ။ အလင်းနေရာမှာ ခင်ဗျားကို အစားထိုးကြည့်ပါ ။ ခင်ဗျားအပေါ်ထားတဲ့ခင်ဗျားမိခင်ရဲ့ သဘောထား မေတ္တာဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး ။ တသမှတ်ထဲအမြဲချစ်နေမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားအပေါ် ခင်ဗျားသူငယ်ချင်း မောင်မောင် ထားတဲ့ သဘောတရားနဲ့အောင်အောင် ထားတဲ့ သဘောတရားတွေဟာ ခင်ဗျားနဲ့ မောင်မောင်တို့အောင်အောင်တို့ ပေါ်မှာသာ သက်ဆိုင်တဲ့ သဘောတရား ပါ ။ ဒီသဘောတရား ကို ပိုပြီး တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးသည်ပင်လျှင် ether ထဲမှာ လည်ပတ်နေရပါတယ် ။ ဒီ ether အယူအဆ တိုင်း သာဆိုရင် အလင်းအလျှင် ကို ကမ္ဘာ့သွားရာလမ်းကြောင်း အတိုင်း တိုင်းတာရင် ပိုများပြီး ကမ္ဘာ့သွားရာလမ်းကြောင်း ရဲ့ ထောင့်မှန်အနေအထား က တိုင်းမယ်ဆိုရင် ပိုနည်းရပါလိမ့်မယ် … ။ အဲ့ဒီအတိုင်း ကို ၁၈၈၇ ခုနှစ်မှာ Albert Michelson နဲ့ Edward Moley တို့ နှစ်ယောက် ဟာ အဲ့ဒီအတိုင်းကို အလင်း ရဲ့ အလျှင်ကိုတိုင်းတာခဲ့ပါတယ် ။ Michelson-Morley Experiment ဆိုပြီး လူသိများပါတယ် ။ စမ်းသပ်ချက် က ရလာတဲ့အဖြေကတော့ အကုန်အံ့သြသွားစေခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဘာလို့ ဆို သူတို့ ဟာ ကမ္ဘာ့သွားရာလမ်းကြောင်း အတိုင်း ပဲ တိုင်းတိုင်း ၊ ကမ္ဘာ့သွားရာလမ်းကြောင်း ရဲ့ ထောင့်မှန်အနေအထားပဲ တိုင်းတိုင်း ၊ အလင်းအလျှင်ဟာအတူတူပဲဖြစ်နေလို့ ပါပဲ ။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်မတိုင်ခင် အထိ ဒီ စမ်းသပ်ချက်အကြောင်းကို အမျိုးမျိုးအဖြေထုတ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုမှက ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
၁၉၀၅ ခုနှစ်မှာ တော့ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံရဲ့မူပိုင်ခွင့်ရုံး က သာမန် စာရေးကလေးတစ်ယောက်ကနေပြီး တော့ ether ဆိုတဲ့အရာ မရှိဘူး လို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောခဲ့ပါတယ် ။ တကယ်လို့ များ ကျွန်တော်တို့ ဟာ Newton ယုံကြည်အားထားခဲ့တဲ့ ပကတိ အချိန်ဆိုတဲ့အရာကိုများ စွန့် လွှတ် ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီ ether ဆိုတဲ့ အယူအဆကြီးတစ်ခုလုံး ကို ပယ် လိုက်လို့ ရတဲ့အပြင် ပိုပြီး တိကျတဲ့ သဘောတရား ကို ရနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဆိုလာပါတယ် ။ ဒီ လို ပြောတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု ဟာ ဘယ်လောက်တောင်မှ ဖိအားတွေ များမယ်လို့ ခင်ဗျားထင်ပါသလဲ ? Newton လိုလူ ရဲ့ အယူအဆ ကို ဗြောင်းဗြန်လှန်ဖို့ ဆိုတာ တော်ရုံလူ လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး ။ Newton ဆိုတာ သိပ္ပံနယ်ပယ် မှာ ဘုရင်တစ်ပါး ပါပဲ ။ သူ့ ရဲ့ ပကတိအချိန်အယူအဆ ကို တွန်းလှန်ပြစ် ခဲ့တဲ့ မူပိုင်ခွင့်ရုံးက သာမန် စာရေး လေး ကတော့ နောက်အခါမှာ ၂၀ ရာစု ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဖြစ်လာမဲ့ Albert Einstein (၁၈၇၉-၁၉၅၅) ပါ ပဲ ။
(အပိုင်း ၂ ကို ဆက်လက် ဖော်ပြ ပါမည်။ ဆောင်းပါး အပြည့်အစုံ ကို တစ်ခါထဲ ဖတ်ရှုလိုပါက Curiosity Science Magazine Year 1- Issue6ကို Download ကာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
← ၃၀၀၀၀ ဘီစီမှ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဒိုင်ယာရီ
ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ သိပ္ပံပညာ →